Inkampani iphrofayela - Shenzhen KTC Technology Group
Inkampani iphrofayela Dēmosthenous kukaMongameli Enterprise Culture Ezigcwalisiwe Izitifiketi Brand Indaba ngokuBambisana Mode Factory ifotho Isiqophi Isingeniso Abasebenzi Imisebenzi Ingoma KTC
Interactive Flat Panel CCTV Gada Commercial TV Digital Signage Professional Gada
Endoscopic Khombisa Steel
PACS Intergrated Khombisa
Ukubonisana Khombisa Centre
Ukuboniswa kwesithombe se-Ultrasound
Multi Function Impilo detector
LED-TV commercial Ekhombisa Ekhombisa Medical
TV-R & D Dept.
R & D Sakhiwo Dept. R & D Electric Dept. R & D Software Dept. R & D Mkhiqizo Dept.
Isigeniso Ku-R & D Dept.
Ngemva Yamadivayisi Izikhungo Isiqinisekiso Imigomo
Imininingwane Yokuxhumana Bank Imininingwane Ukubonisana & Khalaza Map (KTC Shenzhen) imephu (KTC Huizhou)
Ikhaya / mayelana KTC/ Inkampani iphrofayela
Shenzhen KTC Technology Group (ezobizwa emva kwalokhu ngo "KTC"), eyasungulwa ngo-1995 futhi ikomkhulu Shenzhen, ngokukhethekile yokukhiqiza of flat panel imikhiqizo ukubonisa esibulalayo. It ingenye abakhiqizi bokuqala LCD Abaqaphi, LCD TV, commercial LCD terminals LCD yezokwelapha ezikhumulweni e-China.
Okwamanje, i-Group ine abasebenzi abangaphezu kuka-6,000, futhi ehlakaniphile embonini amapaki e Shenzhen kanye Huizhou, nge endaweni phansi bezakhamuzi 400,000㎡. Group ikakhulu siqukethe Shenzhen KTC Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Commercial Khombisa Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Intelligent Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd., Huizhou KTC Technology Co. , Ltd, Hong Kong KTC Technology Co., Ltd., njll
Njalo zokunamathela umqondo zebhizinisi "Ukuqalisa Ubuqotho kwendle, futhi Gxila Ikhwalithi Isevisi", KTC uzibophezele ekuhlinzekeni imikhiqizo eliphezulu futhi ukukhonza amakhasimende indinganiso ephakeme. It kuqinisa uhlelo izinga nokuvikelwa kwemvelo, futhi isungule nohlelo lokuphatha unqambothi. KTC iye eqinisekisiwe ngaphansi SGS ISO9001: 2015 uhlelo lokuphathwa quality, SGS ISO14001: 2015 kwemvelo ukuphathwa uhlelo, uhlelo SGS ANSI / ESD S20.20-2014 osenyameni electrostatic standard, Electronic Imboni Code of Conduct (EICC), nokuhlanganiswa informatization kanye nohlelo lokuphatha kwezimboni, njll
Imikhiqizo ka KTC Iqembu zidlulile izitifiketi ezifuywayo kwezilwandle eziningi ezifana CCC, TCO03, CE, CB, FCC, UL, SASO, TUV, RoHS, Energy Star, futhi CECP. Futhi, KTC ukwazisa kakhulu ukuzikhandla ukuphathwa yangaphakathi futhi isungule umsindo PDM, ERP, CRM, SCM futhi mes nohlelo lokuphatha.
Ngenxa kazwelonke hi-tech kwebhizinisi kanye R egunyaziwe lobuchwepheshe & D isikhungo e Shenzhen, KTC zaba R umsindo & D uhlelo - KTC Technology Center, ngokusebenzisa phezu iminyaka engu-mali oluqhubekayo nokuthuthukiswa. Lesi sikhungo ithatha umsebenzi ucwaningo core futhi front-end ubuchwepheshe kanye nentuthuko, ukuthuthukiswa ezintsha zemikhiqizo kanye umkhakha okuthuthukile. R & D bokwakhiwa kwezindlu zayo siqukethe wezakhiwo, Electrical, Software, Optical, Technology kanye Product Iminyango and Testing & kokulinganisa Centre, okuyinto inamakhulu professional R & D onjiniyela kanye Israyeli kusukela flat panel ukubonisa esibulalayo umkhakha. umnyango R & D ngamunye ngaphansi Technology Center inikezwa nge imisebenzi abafanele, nokobana ukuthuthukiswa ne eziphambili ngokubambisana ukuphathwa nokuthuthukiswa kohlelo (PDM uhlelo), Imikhondo mkhuba nokuthuthukisa ithekhnoloji ezimbonini. R & D ezingeni futhi izinga lokuhlolwa kwabo amakhono isikhundla phakathi best in the industry.
Ukunakekela ukukhula nokuthuthuka wonke umsebenzi, KTC ukwenze ezifezwayo dolobha okokufaka nokuqeqeshwa ithalente onekhono, futhi ukusungulwa uchwepheshe onekhono isisusa ukuphathwa indlela, njll .; ke njalo ithuthukisa ukwakhiwa ithalente ithimba futhi kwenza imizamo emikhulu ukuheha nokuvivisa kwabasebenzi abanekghono ngaphezulu, ephezulu osezingeni izisebenzi kanye nochwepheshe. Ngokusebenzisa KTC University, entsha uhlelo isisebenzi-mentorship, backbones entsha uhlelo, abaqeqeshi yangaphakathi, iqembu isithakazelo, ukuqeqeshwa kwangaphandle kanye nezinye izinhlelo zokuqeqesha, KTC kusiza izisebenzi ukuba uqaphele ukuhlela umsebenzi futhi self-ngcono, ukhuthaza ukuzinikezela professional, amakhono intuthuko, futhi emisha kanye lokusungula. KTC is sihlonipha "ingcweti Training Model Inkampani e Shenzhen" futhi "Ezivelele Enterprise Social Umthwalo Ukugcwaliseka".
Njengoba KTC langena emkhakheni PC e-1990, liye okwenza nemizamo yabaphikisi ephikelelayo ekuphishekeleni izinga okusezingeni eliphezulu ngokusebenzisa ukuphathwa kahle ibhizinisi, ubuciko elimangalisayo futhi isevisi uqobo, okubonisa sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe mkhulu smart flat panel ukubonisa ensimini. The Inkampani iye zilandelana ahlonishwe ngokuthi "Top 100 Electronic Imininingwane Enterprises e China", "2008 Forbes ECHINA 200 UP-KANYE-COMERS", "China Top 10 Umbala TV Export Inkampani", "Top 500 Private Ukukhiqiza Enterprises e China", " Top 100 Ukukhiqiza Enterprises e Guangdong "," Top 100 Industrial Enterprises e Shenzhen "," Top 100 Independent Ukuqamba Enterprises e Shenzhen "," ODM Suppliers Okuhamba phambili kwe-Commercial LCD Izinsiza kusebenza ", njll, okuyinto ulilethele nomphumela omuhle kwezenhlalo kanye nethonya.
imikhiqizo KTC smart kudayiselwa emazweni kanye izifunda eNingizimu Melika, eNyakatho Melika, eYurophu, e-Afrika, e-Australia nase-Asia. The Inkampani isungule esitebeleni yokuthengisa inethiwekhi futhi zigcinwe nobudlelwane obuhle wokubambisana emabhizinisini ezifuywayo international bodumo. Kule minyaka, KTC uye kokuzihlanganisa uhlelo oluphelele futhi umsindo ezifuywayo kwezilwandle emva-yokuthengisa amasevisi.
Njengoba flat panel ukubonisa ingena entsha esikhatsini sedijithali, ehlakaniphile futhi kususelwe kunethiwekhi, KTC uyanda ukuba nama-smart TV, izibonisi yezokwelapha, izibonisi commercial nakweminye imikhakha ngokusebenzisa emisha okuqhubekayo, core ubuchwepheshe ngempumelelo, futhi inkonzo izingxenye kanye ngokwezifiso. Sekuvele omunye Top 100 Electronic Imininingwane Enterprises e China. Nge ezimele R & D uhlelo kanye nezinzuzo kwezobuchwepheshe, Inkampani isigunyaziwe njengoba kazwelonke hi-tech kwebhizinisi kanye R kamasipala & D isikhungo e Shenzhen. Libuye asebenzayo ukuhlola onobuhle ezintsha ibhizinisi nokudala kwezidingo. Kususelwa imikhiqizo umahluko bese ngokwezifiso kanye nezinsizakalo, ke sihlose ukuvula up amathemba amasha ngoba yokuthengisa ukukhula ukwakha futhi njalo ngcono ezihlakaniphile yokukhiqiza uhlelo nomndeni umkhiqizo, kanjalo ekubekeni isisekelo engaguquki ekuthuthukeni kwenkampani.
Ufuna esikhathini esizayo, KTC ngeke, ne isithombe esisha futhi sinamathela umqondo inkonzo 'Amakhasimende Okokuqala futhi Idala Nothando ", njalo ukuthuthukisa amakhono ayo ekuthuthukisweni ezintsha, futhi ukusungula futhi sithuthukise yokukhiqiza uhlelo lwayo ezihlakaniphile, ngaleyo ndlela ukunikeza amakhasimende nge high -quality smart imikhiqizo ukubonisa kanye nezixazululo. Nge welithi "Ubuchwepheshe Kuthuthukisa Ngibambeni", iNkampani uhamba ubheke sonkana kanye ezingeni eliphakeme, sizama ukuba abe-ikilasi somhlaba nomkhiqizi professional smart flat panel imikhiqizo ukubonisa.
KTC Commercial Khombisa
Thuthukisa Ukuphila Isimo nge Technology
Copyright © 2019 Shenzhen KTC Technology Group Wonke Amalungelo Agodliwe.
E-mail Site Map Imigomo yokusetshenziswa Inqubomgomo yemfihlo
NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu